စိတ်ကြိုက် Anti-Metal စမတ်ကဒ်, စိတ်ကြိုက် Anti-Metal PVC ပစ္စည်း RFID ကဒ်, စိတ်ကြိုက် Anti-Metal ပလပ်စတစ် IC ကဒ်
 » RFID ဆကျကပျ Tag ကို » anti-သတ္တု Tag ကို » အခွားသော Anti-သတ္တု Tag ကို
အခွားသော Anti-သတ္တု Tag ကို သတ္တုဆန့်ကျင် PVC စမတ်ကဒ်, စိတ်ကြိုက် Anti-Metal ပလပ်စတစ် IC ကဒ်, စိတ်ကြိုက် Anti-Metal ပလပ်စတစ်စမတ်ကဒ်，စိတ်ကြိုက် Anti-metal IC Card, စိတ်ကြိုက် Anti-Metal PVC ပစ္စည်း RFID ကဒ်, စိတ်ကြိုက် Anti-Metal PVC ပစ္စည်း RFID တံဆိပ်, စိတ်ကြိုက် Anti-Metal စမတ်ကဒ်, စိတ်ကြိုက် Anti-Metal စမတ်တံဆိပ်, စိတ်ကြိုက် Ultra-thin Mini Anti-Metal Tag, စိတ်ကြိုက် Ultra-thin PVC Material Mini Anti-Metal Tag
ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုများ: အရွယ်, အထူ, ပုံသဏ္ဌာန်, အပေါက်နှင့်အတူ, RF အကြိမ်ရေ, IC chip ကို, မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်သို့မဟုတ် offset ပုံနှိပ်ပုံစံ, လိုဂို, QR ကုဒ်ကို, စသည်တို့ကို.
ပရိုတိုကောစံချိန်စံညွှန်းများ: ISO ကို 11785/11784, ISO ကို 14443, ISO ကို 15693, ISO ကို 18000-6B / 6C
chip အကြိမ်ရေ: LF 125KHz / HF 13.56MHz / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF 860-960MHz
chip အမျိုးအစား: M1 S50 / S70, M1 ULT10, ULT ကို C, ICODE2 SLI ကို / SLI ကို-S က / L-SLI ကို / SLIX, SLIX-L ကို, MF DesFi 2K / 4k / 8K, Ti2048, EM4102, EM4200, EM4305, EM4450, TK4100, T5557, CET5500, Hitag2, Hitags, FMl208(စီပီယူ),စသည်တို့ကို.
Reading အကွာအဝေး: LF / HF 2.5-10cm
UHF 1-15M(စာဖတ်သူကိုအင်တင်နာနှင့် tag ကိုအရွယ်အစားအရသိရသည်)
Operating အပူချိန်: 1-2မီလီမီတာအထူအပူချိန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်: -100℃ ~ + 130 ℃ (-148℉ ~ + 266 ℉)
2-4မီလီမီတာအထူအပူချိန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်: -100℃ ~ + 150 ℃ (-148℉ ~ + 302 ℉)
operating စိုထိုင်းဆ: 0-95%
ရှုထောင့်: အထူ 0.7 ~ 1.2mm, အရွယ်အစား 85,6 × 54mm, 45× 45mm, 20× 25mm, /16 / 18/20/30 / 50mm, အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် & ပုံသဏ္ဌာန်
ပစ္စည်း: PVC + Ferrite စာရွက်(စုပ်ယူသော Wave ပစ္စည်း), 3M စတစ်ကာများနှင့်ဖုံးလွှမ်းနိုင်ပါသည်
ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်: Ultrasonic အော်တိုစက်ရုံလိုင်းများ / အလိုအလျောက်ဂဟေ
သတ္တုဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကိုလည်းသတ္တုလျှပ်ကာပစ္စည်းများဟုခေါ်သည်, ferrite ပစ္စည်းများ, အီလက်ထရောနစ်တံဆိပ်များအတွက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ, နှင့်လည်းအဖြစ်လူသိများကြသည် "သံလိုက်အထည်". 13.56MHz / 125KHz မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းကတ်များ / အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းကဒ်များအတွက်သင့်တော်သည်, Anti- သတ္တုတံဆိပ်များကိုသို့ထုပ်ပိုးနိုင်ပါတယ်, တံဆိပ်များကိုသာမန်အားဖြင့်သတ္တုနှင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်မျက်နှာပြင်များတွင်အသုံးပြုရန်မွမ်းမံပေးသည်, သတ္တုအားဖြင့်အင်တင်နာအချက်ပြမှုများ၏စုပ်ယူမှုကိုထိရောက်စွာလျှော့ချပေးသည်, ထိုသို့အားဖြင့်အင်တင်နာရဲ့အာရုံခံအကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်, အင်တင်နာရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ. သတ္တုဆန့်ကျင်သောအညစ်အကြေးများကိုသတ္တုထုတ်ကုန်များ၏မျက်နှာပြင်တွင်ကပ်ထားသည်, နှင့် induction အကွာအဝေးယေဘုယျအားဖြင့် 1 ~ 10cm ဖြစ်ပါတယ်.
ရေဒီယိုလှိုင်းကဒ်ကိုသတ္တု ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမှကာကွယ်ရာတွင်သတ္တုဆန့်ကျင်မှုရှိသောစမတ်ကဒ်သည်သတ္တုဆန့်ကျင်ပစ္စည်းအားအရံအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။, ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းကဒ်ကိုသတ္တုပစ္စည်းတစ်ခု၏မျက်နှာပြင်နှင့်ချိတ်ထားလျှင်ပင်သေချာစေရန်, ကဒ်ဖတ်စက်သည် IC chip ကိုဖတ်နိုင်၊ ရေးနိုင်သည်. သတ္တုဆန့်ကျင်သောစမတ်ကဒ်သည်စမတ်ကဒ်များထုတ်လုပ်ရာတွင်လမိုင်းနှင့်လက်သီးဖြင့်ထိုးခြင်းလုပ်ငန်းကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုသည်. ၎င်းသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၏လက္ခဏာများရှိသည်, မည်သည့်အရွယ်အစားနှင့်သတ်မှတ်ချက်မဆိုသတ္တုဆန့်ကျင်သော PVC စမတ်ကဒ်များထုတ်လုပ်နိုင်သည်.
သင်၏ထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက် Anti-Metal Smart Card ကိုကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားပါသည်, စိတ်ကြိုက် Anti-Metal PVC ပစ္စည်း RFID ကဒ်, စိတ်ကြိုက် Anti-Metal ပလပ်စတစ် IC ကဒ်
prev: RFID ဘိလပ်မြေတံဆိပ်ကို 6cm ထည့်နိုင်သည်, UHF ကွန်ကရစ်သေတ္တာများ
RFID ဘိလပ်မြေတံဆိပ်ကို 6cm ထည့်နိုင်သည်, UHF ကွန်ကရစ်သေတ္တာများ
ခိုင်ခံ့သောလျှပ်စစ်သံလိုက်ပတ်ဝန်းကျင် RFID Anti-metal Tag
မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း Built-in RFID အထူးဆန့်ကျင်သတ္တု Tag ကို
စတစ်ကာ / ဆန့်ကျင်အတုတံဆိပ်တပ်ရန် (26)